Kamwana kainge kasati kaboorwa, ndakazoiti yemusoro mutsvuku shweee! | Nhau Dzevakuru
Home Nhau DzeBonde Kamwana kainge kasati kaboorwa, ndakazoiti yemusoro mutsvuku shweee!
Ndaigara hangu pa Joza ndichishanda kuzama kutsvaga amri kuti tigone kurarama. Ndaichengeta hangu cash yangu zvekuti ndakasvika R65k in cash plus grocery nerimwe ngwanda randaive ndatenga semunhu aiva negore asati asvika kumba, kumusha kwaiva namhamha, vafanha vangu vatatu plus two vazukuru vana vasister yangu.
Rakasvika zuva rekuenda kuZim, ndainge ndapihwa mota neimwe shamwari yangu apa it was BMW, leather interior, plus mag nebooster iwe kaiwe yedu yekuda kufamba nemagar iyi. Ndakapinda rwendo ndokunosvika kumba vanhu vasingafungire, muchembere akachema kuburitsa misodzi zvekuti akati l thought kuti zvimwe wakafa mwanangu.
Takatamba ndokufara uunongozivawo ukasvika kumba even nesounds rinomuka volume irikuseri plus sound system randaive ndauya naro, unongonzwa masasi. Ndichitobva hangu pamashops nevapfanha vangu ndiye dhuma nababe, varumeka chakanaka chakanaka mhandara hauboore nechimuti, painge paita zvemwana ipapo zvekuti ndakapotsa ndapinda mudrainage nnemota yekukumbira apa mboro mupant yakutodairira.
Mupfanha wangu akabva ati “aaah blaz siyanai nako kamwana ako kanetsa, hakabvume vanhu kwauya mabhozida ane cash but hapana adiwa, l think momuziva ndiye Mavis uya aigara pazasi apo kudhuze nekusurgery. Ndakangoti hoo nhai ngaauye adrive muyende kumba ndirikuteera now. Apa ndipo pandaifanirwa kupenya l decided to risk even cash yangu coz mwana uyu kana newewo dai uriwe hamaimboukunda muedzo wekutsva seuyu. Ini hangu ndiri kaslim body but not level rekutorwa nemhepo but zvinoyevedza apa chest iripoo muscle plus six pack. Ndakasvika ndokukwazisa babe ndokupiwa madigits zvikanzi ndatosvika pamba pedu ndichatumira whatsapp since what uri paapp ndokumutambidza +27 number dzandaishandisa.
Pasina nguva ndakaona chat ndokunoona mwana, this time ndaive ndaane BMW yangu, takataura mbichana ndokuenda hangu naye mutown, takadaro sezvo raive rakatsvinda, semunhu achangobva pajoza Bond risati ratsikiswa kuti roshanda ndakagukuchira maRands mwana akavhunduka ndichimuti tenga food yaunoda ndokumutambidza R400.
Achidzoka ndakangomutarisa neziso rembavha riye ndokumuti kiss haana kuramba ndini uyo nayo kiss ndokuvhara mawindow ndakazozvidzora but mumwe Wangu aive atopera basa kare, ndakangoti budei mutown ndokunopaka yepaneimwe imba ndokutanga kumubata pese, ndakatanga kumukatanura mumota imomo pant ndokuriisa paside ndokunoti muromo pabeche wanika mwana ongoti iiiiih Babee pliz usadaro aaa aah iwe Kani nefirst day here aaah aamaaii kaniii iiiiih Babee Kani ussaaaadaroooh!!!!!!
Achibva atunda zvekuti painge akagara pakaita kutota, kunoti ndichinoti mboro ingapinda wanike mwana atori kavirgin kasati kaboorwa, ndakazoiti yemusoro mutsvuku shweeeeee, mwana akabowa achibva anditi pachigunwe n’aaa ndakarumwa, ndichinziburitsa mboro yangu. Zvikati ndinechipo chemboro ndichinoti buritsei achinoregedza ndokuiti bvooo zvekare ndakamusvira kusvika akubatirirawo ndakanzwa odedera ndokunoti tese ka1 ndichitiwo wodzvo huronyo kunodai wanike sit rese, rangova mashiya kungoti dzikisei window wanike pane vakadzi two vaitowokera pono yemahara, chemusi uyu apa mwana akabva abata pamuviri ndakutosvira everyday now.
Previous articleMurume ngaakuise everyday manheru & makuseni asati ayenda kubasa!
Next articleZoey delighted men are learning ‘Bonde’ to satisfy the needs of their women in bed!